पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको छ : अमरराज माखीम
पाँचथर । पाँचथरको दक्षिणी गाउँपालिका मिक्लाजुङको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाले चारपाङ्ग्रे मोटर नकिनी माेटर साइकलबाट नागरिकहरूको सेवा गरिरहेर चर्चामा आएका गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् अमरराज माखिम । पालिकाबाट सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि पालिकामा प्रशाशकीय भवन निर्माण भइरहेको छ । सामुदायिक भवन निर्माणको कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । यस्तै खुला आकाशमुनि रहेको पशुहाट, कृषि हाट बजारलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
पालिकाले बधशाला निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पशु बजार लाग्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गरिएको छ । स्वास्थ्य केन्द्र, सभागृह, कृषि थोक, बसपार्क, कभर्ड हल, डम्पिङ साइट, चिडियाखाना, चिस्यान केन्द्र, हाईअल्टिच्युट खेलमैदान, पशु बजार, कृषि भवन, आँखा अस्पताल, गाउँपालिका भवन, नापी, मालपोतलगायतका कार्यालयका लागि गाउँपालिकाको नाममा जग्गा निःशुल्क रूपमा प्राप्त भएको छ । अहिले पालिकामा अब पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको अवस्था छ । यिनै समसामयिक विषयमा माखिमसँग केन्जाे खबरले गरेको कुराकानीको सार :
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा केके काम गर्नुभयो ?
२०७४ सालको निर्वाचनमा म विजयी भएपछि पालिकाको विकास गर्ने क्रममा विकासको मुख्य कुरा नै सडक भएकाले सबै वडा जोड्ने गरी सडक निर्माण गरियो । अहिले मिक्लाजुङका सबै आठवटै वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । एक वडाबाट अर्को वडामा मज्जाले पुग्न सकिन्छ । कृषि सडकहरू प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्ने कार्य यो अवधिमा गरेको छ । वडा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन एउटा वडाबाहेक सबै वडाका वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाका सबै वडामा विद्युतीकरण गरिएको छ । पालिकाबाट सेवाग्राहीहरूलाई सुविधा दिनका लागि प्रशाशकीय भवन आवश्यक पर्ने रहेछ । त्यसका लागि लिफ्टसहितको गाउँपालिका भवन निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको छ । सामुदायिक भवन निर्माणको कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । यस्तै खुला आकाशमुनि रहेको पशुहाट, कृषि हाट बजारलाई व्यवस्थित गरिएको छ । बधशाला निर्माण सम्पन्न भएको छ । पशु बजार लाग्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
आँखा अस्पतालका लागि ६ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा ल्याइएको छ । अब आँखा अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने तयारी गरिँदै छ । रवि बजारको चार रोपनी जग्गामा डम्पिङ साइट पनि तयार गरिँदै छ । चिडियाखानाका लागि १५ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाले प्राप्त गरिसकेको र अब निकट भविष्यमा गाउँपालिकाले रवि बजारमा चिडियाखाना सञ्चालनको तयारी पनि गाउँपालिकाले गरेको छ ।
म निर्वाचित भएर आएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य प्रयोजनका लागि स्थानीयवासीसँग २ सय ७५ रोपनी जग्गा निःशुल्क रूपमा गाउँपालिकाको नाममा ल्याएको छु ।
स्वास्थ्य केन्द्र, सभागृह, कृषि थोक, बसपार्क, कभर्ड हल, डम्पिङ साइट, चिडियाखाना, चिस्यान केन्द्र, हाईअल्टिच्युट खेलमैदान, पशु बजार, कृषि भवन, आँखा अस्पताल, गाउँपालिका भवन, नापी, मालपोतलगायतका कार्यालयका लागि जग्गा निःशुल्क रूपमा गाउँपालिकाको नाममा ल्याएको छु । अब पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको अवस्था छ ।
पालिकाको केन्द्र रवि बजारभित्र प्रदेश सरकारको ५ करोड ८० लाख लागतले बजारभित्रको २ हजार ३ सय मिटर सडक पिच गरिसकिएको छ ।
कृषकहरूलाई अनुदान दिएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य सुरु गरेको छु । ४० मुरीभन्दा धेरै धान फलाउने किसानलाई १ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिएको छ । यस्तै, चार फुट अग्लो र २० फुट लम्बाइको थाङ्ग्रो, मकै फलाउने किसानलाई पनि १ लाख अनुदान दिने घोषणा गरेका छौं । यस्तै, ३५ मनदेखि माथि आलु फलाउनेलाई प्रतिकेजी अनुदानको कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिकेजी २० रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।
सिँचाइ कुलोका योजना सञ्चालनमा रहेको गाउँपालिकामा पशुपालनका कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । कृषकलाई दिएका अनुदान सदुपयोग भए\_ नभएकाे अनुगमन गर्न वडास्तरमै संयन्त्र बनाइएको छ ।
विद्यालयको सुधारका लागि भवनहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ । पर्यटकीय विकासका लागि जरिबुटे डाँडामा बुद्धपार्क निर्माण गरिँदैछ । दीर्घरोगीहरूका लागि गाउँपालिकाले केही औषधि खर्च दिने कार्य सुरु गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीहरूलाई सहजताका लागि भवन निर्माण गरिएको छ । सहज यात्राका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य गरिएको छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्र भएकाले अनुदान दिने कार्य गरिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट सहयोग भएन भने हामी मात्रैले त के नै पो गर्न सकिन्छ र ? हामीले उनीहरूले दिने अनुदानबाट चल्ने हो । उहाँहरूबाट सहयोग त पाइयो नै, तर कहिलेकाहीं समन्वयमा समस्या हुँदो रहेछ । कहिलेकाहीं संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विभिन्न ऐन–कानुनहरू स्थानीय तहमा व्यावहारिक नहुँदा काम गर्न असहज हुँदो रहेछ ।
यो अवधिमा समस्याहरू के–के रहे ?
पहिलो वर्ष त सिक्दै र विभिन्न ऐन–कानुनहरू बनाउँदै बित्यो । अनि दुई वर्ष कोरोना महामारीले खासै काम गर्न दिएन । तर अब सबै ऐन–कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । अब काम गर्न केही गाह्रो छैन ।
यो अवधिमा के–के गर्न सकिन जस्तो लाग्छ ?
गर्न बाँकी काम धेरै नै छन् । अघि पनि भनिहालें नि, पहिलो वर्ष त सिक्दै र विभिन्न ऐन–कानुनहरू बनाउँदै बित्यो । अनि दुई वर्ष कोरोना महामारीले खासै काम गर्न दिएन । अब महामारी पनि कम हुँदै गयो । सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ । कार्यकालको अन्तिमतिर पुगिएको छ । भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भएको छ । खासै त्यस्तो धेरै गर्नै सकिनँ भन्ने त लागेको छैन ।
कर्मचारीहरूको सहयोग कस्तो पाउनुभयो ?
कर्मचारीहरूकै सहयोगबाट यतिका कामहरू गर्न सकिएको हो । यो मेरो मात्र प्रयासले यत्रो काम भएको होइन । कर्मचारीहरूको अथक मेहनतको परिणामले नै यतिको रिजल्ट आएको हो ।